Labo xiddig oo Chelsea u ciyaara, shan ciyaaryahan oo Liverpool ka tirsan, Erling Haaland iyo Neymar oo qarka u saaran inay ganaaxyo la kulmaan – Gool FM
(Yurub) 13 Abriil 2021. Xiddiga Paris Saint-Germain ee Neymar Jr iyo weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland ayaa hoggaaminaya xiddigaha ganaaxa la kulmi doono kulammada lugta labaad ee wareegga siddeed-dhammaadka Champions League haddii ay calaamadda Hurdiga ama Jaallaha qaataan.
Xeerka ganaaxa kaararka uruuray ee UEFA ayaa dhigaya in laga billaabo toddobaadka koowaad ee xilli ciyaareedka Champions League la xisaabin doono xiddigaha uruursada calaamadda Jaallaha, iyadoo xiddigii saddex jeer jaalle loo taagaa uu qaadan doono ganaax hal kulan ah.
Sidaas darteed, Laacibka reer Norway ee Haaland ayaa laba kaar oo jaalle kala qaatay labadii lug ee wareegga 16-ka Champions League xilli ciyaareedkan kulammadii uu ka hor tagay Sevilla.
Halka Neymar uu isaguna jaalleyaal qaatay ciyaarihii Paris Sain-Germain ay garoonkeeda kula ciyaartay Manchester United iyo RB Leipzig wareegga guruubyada.
Labada xiddig ayaa seegi doono lugta hore ee wareegga semi-finalka tartanka horyaallada Yurub haddii ay kooxahooda usoo gudbaan maadaama caawa iyo habeen dambe la ciyaari doono lugta labaad ee wareegga siddeed-dhammaadka.
Trent Alexander-Arnold, Sadio Mane, James Milner iyo Georginio Wijnaldum ayaa min hal jaalle u jira ganaax hal kulan ah maadaama ay min laba jaalle qabaan, halka Jordan Henderson uu qayb ka yahay liiskan inkastoo uu dhaawac ku seegayo kulanka habeen dambe Liverpool ay la ciyaareyso Real Madrid.
Ciyaartoyda Chelsea ka wada tirsan ee halka jaalle u jira ganaax hal kulan ah waxay kala yihiin Hakim Ziyech iyo Mateo Kovacic, kuwaasoo kulanka caawa ee ay wajahayaan Porto iska ilaalin doona in calaamadda Jaallaha la siiyo.
Waxaa sidoo kale jira ciyaartoy fara badan isla markaasna ciyaaraya wareegga siddeed-dhammaadka tartankan kuwaasoo hal calaamad oo digniin ah u jira inay la kulmaan ganaax hal kulan ah, waxaana ka mid ah Man City xiddigaheeda Fernandinho iyo Joao Cancelo, laacibiinta Real Madrid ee Ferland Mendy iyo Federico Valverde.
Xiddigaha Neymar kala tirsan PSG ee kala ah Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa iyo Marco Verratti ayaa iyaguna ganaaxaas halka kulan ah la kulmi doona haddey jaalleyaal qaataan, waxaana soo raaci kara Emre Can oo Dortmund ka tirsan iyo saddexda ciyaaryahan ee Bayern u ciyaara ee kala ah Jerome Boateng, Lucas Hernandez iyo Joshua Kimmich.
Kaararka Jaalle ah oo tirintooda lasoo billaabay kulankii koowaad ee wareegga guruubyada Champions League xilli ciyaareedkan ayaa dhici doona marka uu wareeggan siddeed-dhammaadka dhammaado, waxaana xiddigaha heysta labo jaalle ama wax ka yar laga cafin doonaa guud ahaan kaararkoodii.
Sidaas darteed, marka laga soo tago xiddigaha qaatay ganaaxyada halka kulan ah, ma jiri doono ciyaaryahan loo tirin doono jaalle uu ka qaatay tartanka xilli ciyaareedkan marka la gaaro kulammada lugta hore ee Semi-final-ka oo dhici doona 27-ka iyo 28-ka April.
Kulammada lugta labaad ee wareegga nus-dhammaadka ayaana la ciyaari doonaa 4-ta iyo 5-ta bisha May kahor inta aan fiinaalka lagu ciyaarin Istanbul 29-ka bisha May.